Phezulu 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ze Forex ezisebenzayo - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex Phezulu 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ze Forex ezisebenzayo
Kunezinkulungwane zamasu atholakalayo kubathengisi. Empeleni, abadayisi abahlukene banamasu ahlukene. Iningi lalawa masu atholakala kalula ukuze abahwebi bawafunde futhi bawasebenzise. Ngobuningi bezinketho ezitholakalayo, abadayisi abaningi bebelokhu befuna ukuthola isu "elingcono kakhulu" lokuhweba forex. Kodwa silichaza kanjani isu "elingcono kakhulu" lokuhweba forex elisebenza?
Well, ukuhweba okungcono kakhulu yilolo olusebenzela umhwebi ngamunye futhi olusebenza ngokufanele emakethe ohweba kuyo.
Abadayisi abahlukene banokuthambekela nobuntu obuhlukene. Abanye bangase bakhethe uhlobo olukhululekile lokuhweba kuyilapho abanye bekhetha isenzo. Abanye bazimisele ngokubheka amaphethini kuyilapho abanye bekhetha uhlobo lokuhweba lwe-algorithmic. Awukho usayizi owodwa olingana nalo lonke uhlobo lwesu lokuhweba. Konke kuncike kubuntu bomthengisi nokuthi yini emfanela kahle kakhulu.
Izimakethe ezihlukene nezimo zemakethe zibiza izinhlobo ezahlukene zamasu okuhweba. Kungaba ubuwula ukuhweba ngethrendi ngokulandela isu emakethe ebophezelekile. Futhi akuwona umqondo omuhle ukuhweba isu lokuqhubeka kwethrendi emakethe ehlehla ngokusobala. Isu elithrendayo elisebenzela ithrendi ekhuphuka kancane lingase lingasebenzi emakethe ethrendayo ebonisa ukubuyiswa okujulile.
Isihluthulelo sokwenza inzuzo emakethe ye-forex ukukhomba isimo semakethe ngendlela efanele nokusebenzisa isu elilungile kuso. Ngezansi kunezinhlobo ezahlukene zesu zonke ezingasebenza esimweni esifanele semakethe.
Nayi iTop yethu 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ze Forex ezisebenzayo.
#1 – Trend Magic RSI Forex Ukuhweba Isu
1 #1 – Trend Magic RSI Forex Ukuhweba Isu
1.1 Inkomba Yomlingo Womkhuba
1.2 Hlunga RSI
2 #2 – Stochastic Cross kwezinzwa Forex Ukuhweba Isu
3 #3 – Cindezela Break Retracement Forex Ukuhweba Isu
3.1 sMAMA Inkomba
3.2 Cindezela Break Inkomba
4 #4 – Isiliva Trend Momentum Forex Trading Strategy
4.1 Isignali Yesitayela Sesiliva
4.2 Isikhombi se-SMI
5 #5 – Amandla Esihlobene Trend Forex Trading Strategy
5.1 200-I-Period Exponential Moving Average (UMAMA)
5.2 Amandla Ezihlobene Oscillator (RSO)
5.3 Heiken Ashi Smoothed Inkomba
6.1 Imiyalo Yokufakwa Kwamasu Okuhweba Forex
6.2 Kunconywe Forex MetaTrader 4 Ipulatifomu Yokuhweba
6.3 Indlela yokufaka i-Top 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ze Forex ezisebenzayo?
Amasu enzuzo anento eyodwa afana ngayo - ukuhlangana. Ukuhlangana kumane kusho “ukuhlangana” kwezinto eziningi. Ngo zokuhweba, uvame ukuthola izimo noma izimo zemakethe lapho kunezinto ezithile zokunquma, njengezenzo zamanani, amaphethini othini lwezibani, izinkomba, njll, hlangana ndawonye ukhombise ukuqondiswa okufanayo kokuhweba. Lezi wuhlobo lwezimo zemakethe ezivamise ukukhiqiza ukusethwa kwamathuba okuhweba okuphezulu. Cishe konke, uma kungenjalo konke, amasu enzuzo asebenzisa ukuhlangana.
I-Magic RSI Forex Trading Strategy iyisu elihlinzeka ngohwebo olusekelwe ekuhlanganeni kwezinkomba ezimbili ezihambisanayo.. Lokhu kunikeza abathengisi ithuba lokuhweba ngemakethe ngamathuba aphezulu okuhweba, enikeza abathengisi ithuba eliphakeme lempumelelo.
Inkomba Yomlingo Womkhuba
Inkomba yeTrend Magic iyinkomba yomfutho ekhombisa abathengisi inkomba yesimo samanje.
Idweba umugqa eshadini lentengo elinombala ngokuya ngokuya kwenkambiso. Imigqa eluhlaza okwesibhakabhaka edwetshiwe ngezansi kwesenzo sentengo ikhombisa ukuthambekela kwe-bullish, ngenkathi imigqa ebomvu idwetshiwe ngaphezulu kwesenzo sentengo ikhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
Ukubuyiselwa emuva kwethrendi kubangela ukuthi ulayini wesikhombi seTrend Magic ushintshe umbala. Lezi zinguquko zombala zingasetshenziswa njengesiginali yokungena kuthrendi elandelayo isu noma isu lokuguqula umkhuba.
I Isihlobo Amandla Inkomba (I-RSI) iyinkomba yezobuchwepheshe esetshenziswa kabanzi. Kuyinkomba ekhangayo elingisa ukunyakaza kwentengo eduze.
I-RSI isusa kusuka ku- 0 uku 100 futhi ine-midpoint ku 50.
Kunezindlela eziningi zokuhumusha i-RSI. Ngokwesiko, amanani angenhla 70 kuthathwa njengokuthengwe ngokweqile ngenkathi amanani angaphansi 30 kubhekwa njengokuthengiswa ngaphezulu. Abathengisi abaguqukayo basho ukusebenzisa lezi zimo ukuhweba ukubuyela emuva ngokuya ngombono wokuthi njengoba intengo ikhulisiwe, Intengo kungenzeka ibuyele emuva kuncazelo yayo.
Noma kunjalo, kunenye indlela yokuhumusha i-RSI ngokususelwa kumqondo ophikisayo. Abadayisi be-Momentum babehumusha izikhala eziphuma ku- 30 uku 70 ububanzi njengesibonakaliso sokuphuma komfutho.
Isihlungi se-RSI sisekelwe kumqondo wokuqina wesibonisi se-RSI. Isihlungi se-RSI sizophrinta imigoqo emihle kumfutho we-bullish nemigoqo engemihle kumfutho we-bearish. Lokhu kusiza abathengisi ukuthi balindele ukuphuma komfutho kanye nokubuyela emuva ngokuya ngamasignali anikezwe yinkomba.
Ukuqiniseka okusekelwe ezinkomba zobuchwepheshe kungenye yezindlela ezithandwa kakhulu zokuhweba imakethe ye-forex. Kubangela abathengisi ukuthi bahwebe ngokuya ngemithetho esikhundleni sokugembula ngokususelwa kumqondo wabo. Lokhu kunciphisa ithonya lemizwa efana nokwesaba nokuhaha okuthinta izinqumo zabo zokuhweba, ngaleyo ndlela ibavumela ukuthi babe nokuvumelana kokuhweba kwabo.
I-Trend Magic RSI Forex Trading Strategy isu lokuguqula umkhuba elihweba lapho kuhlangana khona amasiginali wokuguqula inkambiso ngokuya ngenkomba yeTrend Magic kanye nesihlungi se-RSI.
Inkomba yeTrend Magic iyinkomba yokuguqula inkambiso ekhombisa amaphuzu aguqukayo ngqo ngokuya ngokushintsha kombala wayo. Isihlungi se-RSI ngakolunye uhlangothi sikhombisa nezimo eziguqukayo, kodwa-ke lokhu kuguqulwa komkhuba kususelwa ekushintsheni ngomfutho.
Zombili lezi zinkomba zinikeza amasiginali wokuguqula inkambiso ngokuzimela njengenkomba ezimele yodwa, ngokunemba okuphezulu. Noma kunjalo, noma nini lapho izinkomba ezimbili zikhomba ukuhlehla komkhuba cishe ngasikhathi sinye, amathuba okubuyela emuva kwethrendi aphakama kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi amasignali wokuguqula umkhuba anomfutho ngemuva kwawo.
Lezi zinkomba zivame ukuhlinzeka ngemihlangano lapho kukhona ikhandlela eliqinile lomfutho eliphikisana nomkhuba wamanje. Lokhu futhi kuvame ukuqondana nokuphuma okuvela kuzinsizakalo noma ukumelana.
I-Trend Magic.ex4 (izilungiselelo ezizenzakalelayo)
I-Flat Trend RSI.ex4 (izilungiselelo ezizenzakalelayo)
Isikhathi esincanyelwayo: 15-umzuzu, 1-ihora, 4-ihora namashadi nsuku zonke
Isikhathi Sokuhweba: Tokyo, Amaseshini aseLondon naseNew York; ukuhweba esimisweni sokubhangiswa kwemali okuthengiswayo uma kuthengiswa ngezikhathi ezibekiwe eziphansi
Intengo kufanele yeqe ngaphezu komugqa wesikhombi seTrend Magic
Ikhandlela lomfutho we-bullish kufanele libonakale
Isibonisi seTrend Magic kufanele sishintshe sibe nombala oluhlaza okwesibhakabhaka obonisa ukuguqulwa kwesimo se-bullish
Isihlungi se-RSI kufanele sishintshe ukusuka ekuphrinteni imigoqo engemihle iye kumigoqo evumayo ekhombisa ukubuyela emuva kwethrendi kususelwa kumfutho
Lezi zimpawu zokuguqula ukuguquguquka kwesimo se-bullish kufanele zihambisane kakhulu
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa wesikhombisi seTrend Magic ushintsha ubomvu
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho imigoqo yesihlungi se-RSI iba yimbi
Intengo kufanele yeqe ngaphansi komugqa wenkomba yeTrend Magic
Ikhandlela lomfutho we-bearish kufanele libonakale
Isibonisi seTrend Magic kufanele sishintshe sibe umbala obomvu obonisa ukuguqulwa kwesimo se-bearish
Isihlungi se-RSI kufanele sishintshe ukusuka ekuphrinteni imigoqo evumayo iye kumigoqo engemihle ekhombisa ukuguquka kwethrendi okuncike kususelwa kumfutho
Lezi zimpawu zokuguqula emuva kwe-bearish mkhuba kufanele zihambisane kakhulu
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa wesikhombisi seTrend Magic ushintsha ube luhlaza okwesibhakabhaka
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho imigoqo yesihlungi se-RSI iba nhle
Lelisu isu elihle lokuguqula amasu. Ihlanganisa ukuhlangana kwezinkomba ezimbili zethrendi ngenkathi kucatshangelwa umfutho odale ukuguqulwa komkhuba.
Lelisu lidinga ukuthi umhwebi aqonde isenzo sentengo. Lokhu kungenxa yokuthi okufakiwe okukhiqizwa yilelisu kusebenza kahle kakhulu lapho kutholakala ikhandlela lomfutho. Kungcono kakhulu uma amaphethini wokuguqula umkhuba nawo abonwa ngaphambi kokungena.
Abahwebi kufanele futhi bafunde ukuphatha kahle ukuhweba ngokuhambisa ukulahleka kokuma ukuze kuqhekeke lapho kunokwenzeka futhi balandele ukulahleka kokuma endaweni efanele. Lokhu kwandisa isilinganiso sokuwina somthengisi futhi kuvikela nenzuzo ekubuyiselweni emakethe.
Ukuhweba ngaleli su ngokuhlaziywa kwezobuchwepheshe okuhlakaniphile kufanele kuveze imiphumela emihle kubahwebi.
#2 – Stochastic Cross kwezinzwa Forex Ukuhweba Isu
Abathengisi abaningi bavame ukwenza iphutha lokulandela noma yini ekhanyayo ekufuneni ukuthola "iGrail Engcwele" yokuhweba. Noma ngabe kuyinkomba entsha noma yini, abadayisi babevame ukuzama okuthile okusha njalo.
Manje, akukho lutho olungalungile ngalokho. Kuhle ukuzama ukuphelelisa ikhono lakho ekuhwebeni, futhi lokhu kubandakanya ukufunda. Lapho abathengisi bavame ukungahambi kahle lapho amasu abo eba yinkimbinkimbi ngokweqile. Bafaka inqwaba yezinkomba becabanga ukuthi okuningi kungcono. Kwezinye izimo, lenzani umsebenzi. Noma kunjalo, kubahwebi abaningi, imininingwane eminingi ingasho umsindo omningi. Lokhu kubenza babambe iqhwa noma nini lapho kuvela ithuba lokuhweba.
Ngezinye izikhathi, amasu amahle kakhulu yilezo ezilula. Izinkomba eziyisisekelo zisasetshenziswa kabanzi ngisho ngabahlaziyi bezobuchwepheshe nabathengisi. Ngisho nabadayisi bamabhange amakhulu basebenzisa izinkomba zesikole ezindala ezitholakala kalula kubadayisi abathengisayo.
I-Stochastic Cross Reversal Forex Trading Strategy ingenye yamasu ancike enkombeni eyisisekelo. Yize izinkomba ezisetshenzisiwe zishintshiwe ukwenza izinto zibe lula kakhulu kubahwebi, izimiso eziyisisekelo ngemuva kwayo zihlala zinjalo.
AmaStochastic Oscillators angenye yezinkomba zobuchwepheshe eziyisisekelo ezisetshenziswa kakhulu ngabadayisi. Le nkomba yasungulwa nguDkt. UGeorge Lane emuva ngasekupheleni kwawo-1950. Noma lesi sikhombisi sibonakala sisihle sakudala, abathengisi abaningi abangochwepheshe bazi ngokuqinisekile ukuthi iyasebenza. Empeleni, lokhu kungenye yezinkomba engizithandayo "eziyisisekelo".
I-Stochastic Oscillator iyinkomba yokugqoza yomfutho. Ihlela imigqa emibili ekhishwa kuyo 0 uku 100. Umugqa owodwa uhamba ngokushesha ukwedlula omunye. Umkhuba ubhekwa njenge-bullish noma nini lapho umugqa osheshayo ungaphezulu kolayini ohamba kancane. Ngokwesinye isandla, ukuthambekela kubhekwa njenge-bearish noma nini lapho umugqa osheshayo ungaphansi kolayini ohamba kancane. Amathrendi ahlehla noma nini lapho imigqa emibili ihlangana.
Lapho imigqa crossover ebangeni ibalulekile futhi. Imakethe ibhekwa njengedlulisiwe noma nini lapho imigqa emibili ingezansi 20 futhi kuthengwe ngokweqile noma nini lapho imigqa emibili ingenhla 80. Izimakethe ezithengiswa ngaphezulu zinomkhuba oqinile wokubuyela emuva ngamandla, ngenkathi izimakethe ezithengwe ngokweqile zinamathuba aphezulu okubuyela emuva. I-Crossovers eyenzeka ngale kwalezi zindawo inamathuba aphezulu okuholela ekuguqulweni ngokuqhathaniswa nama-crossovers avela ngokungahleliwe ngaphakathi kwebanga elijwayelekile.
Isikhombi se-Stochastic Cross Alert sikwenza kube lula konke lokhu kubahwebi. Ukwazi ukuthi lezi zinhlobo zama-crossovers ziyasebenza, inkomba imane inikeze amasiginali noma kunini lapho imigqa iwela khona ngokunyathelisa umcibisholo eshadini okhombe ohlangothini lwenkambiso yawo ekhonjisiwe.
Isikhombisi se-SEFC084 Bulls Bears siyinkomba yokulandela elandelayo esiza abahwebi ekuboneni inkomba-mkhuba yamanje. Lokhu ikwenza ngokunyathelisa imigoqo engahle ibe mihle noma emibi. Imigoqo evumayo ikhombisa ukuchema okunamandla kwemakethe ngenkathi amabha amabi ekhombisa ukuchema kwemakethe ye-bearish. Amabha asuka kokuhle aye kokubi noma okuphambene nalokho kubhekwa njengesignali yokuguqula isimo ngokuya ngale nkomba.
I-Stochastic Cross Reversal Forex Trading Strategy isu lokuguqula isimo elenza ukusetshenziswa kokuhlehliswa okungahle kuhlinzekwe yinkomba ye-Stochastic Cross Alert.
Lezi zimpawu ziqala kusukela ezimweni zemakethe ezinde ngokweqile, kungaba ngokweqile noma okweqile. Abathengisi abaguqukayo abaphakathi kokuvamile bavame ukuthatha lesi siginali benethemba lokuthi intengo izobuyela emuva kwisho. Noma kunjalo, kunamacala amaningi lapho intengo ingenza okungaphezulu kokuphindela emuva kwisho. Imvamisa kuba nomphumela ekuqaleni kwethrendi entsha.
Lelisu lithatha lezi zimpawu ngokuhlangana nenkomba ye-SEFC084 Bulls Bears futhi ligibela lezi zitayela ezintsha kuze kube sekugcineni. Ukhiye waleli su ukuthola ukuhlangana okuqinile phakathi kwesikhombisi se-Stochastic Cross Alert nenkomba ye-SEFC Bulls Bears. Izimpawu zokubuyiselwa emuva kwethrendi ezenziwa cishe ngasikhathi sinye zinamathuba aphezulu kakhulu okuholela kuthrendi. Lokhu kungenxa yokuthi lokhu kuvame ukwenzeka kuphela uma kunomfutho ngemuva kokuhlehliswa.
Isikhathi se-KP: 30
Isikhathi Sokuhweba: Tokyo, ILondon neNew York; ukuhweba kuseshini yezimbili zemali ezithengiswayo lapho kuthengiswa ngezikhathi ezibekiwe eziphansi
Isibonisi se-SEFC084 Bulls Bears kufanele sisuke kokungalungile siye kokuhle okukhombisa ukuguqulwa kwesimo se-bullish.
Isibonisi se-Stochastic Cross Alert kufanele siphrinte umcibisholo okhomba phezulu obonisa isignali yokuguqula isimo se-bullish.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho inkomba ye-SEFC084 Bulls Bears iba yimbi.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho inkomba ye-Stochastic Cross Alert iphrinta umcibisholo okhomba phansi.
Isibonisi se-SEFC084 Bulls Bears kufanele sisuke kokuhle siye kokungalungile okukhombisa ukubuyela emuva kwethrendi.
Isibonisi se-Stochastic Cross Alert kufanele siphrinte umcibisholo okhomba phansi okhombisa isignali ye-bearish yokuguqula isimo.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho isibonakaliso se-SEFC084 Bulls Bears siba sihle.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho inkomba ye-Stochastic Cross Alert iphrinta umcibisholo okhomba phezulu.
Ukuhweba ngokuhlehliswa kwesimo ngomfutho esimweni sokuthengwa ngokweqile noma ngokweqile kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuhweba. Inamathuba aphezulu okuholela kumkhuba omusha ngakho-ke ivumela isilinganiso esiphakeme sengozi yomvuzo ngezinga lokuwina elihle.
Leliqhinga lenza lokho. Inikeza amasiginali wokuguqula umkhuba ngokuya nge-Stochastic Oscillator futhi iqinisekisa ukuthi isignali inomfutho osuselwa ekuhlanganeni kwesiginali nesibonakaliso se-SEFC084 Bulls Bears.
Lelisu lisebenza kahle. Noma kunjalo, kungcono ukufaka okunye ukuhlaziywa kwezinyathelo zamanani wezobuchwepheshe naleli su. Ukuhweba ngezimpawu eziguqukayo kanye namakhefu kusuka ekusekelweni noma ekumelaneni kungaveza imiphumela emihle.
#3 – Cindezela Break Retracement Forex Ukuhweba Isu
Olunye lwezinhlobo zemakethe abathengisi abavame ukulethwa ngabo yisimo semakethe esihamba phambili. Empeleni, Abathengisi abanesikhathi esiningi babehlala befuna lezi zinhlobo zesimo semakethe. Abanye baze bahwebe kuphela ngesikhathi sezimakethe ezihamba phambili futhi bagweme ukuhweba phakathi kwezimakethe ezahlukahlukene. Ukwazi lokho, kubalulekile ukuthi abadayisi babe nesu lokusebenzisa izimo zezimakethe ezihamba phambili.
Izimakethe ezihamba phambili zivame ukuba lula ukuhweba ngokuqhathaniswa nezimakethe ezahlukahlukene. Lesi yisona sizathu esenza abathengisi abaningi bathande ukuhweba ngesikhathi sezimakethe ezihamba phambili. Ukuqondiswa kwezohwebo kulula kakhulu ukukuqonda noma nini lapho umkhuba ucacile. Lokhu kwandisa kakhulu amathuba okuhweba okuwinayo.
Noma kunjalo, noma izimakethe ezihamba phambili kulula kakhulu kunezinye izimo zemakethe, abathengisi abaningi basakuthola kunzima ukuhweba ngenzuzo emakethe ethrendayo. Lokhu kungenxa yokuthi abathengisi abaningi bazama ukujaha intengo esikhundleni sokuvumela intengo ibuyele kubo.
Imakethe inezigaba ezimbili, isigaba sokuncipha nokwandiswa. Lezi zigaba zibonakala kakhulu ngesikhathi sezimakethe ezihamba phambili. Imakethe ibizohlangana ngokushesha lapho kuya khona lo mkhuba, bese ngokuzumayo i-rally iyama. Umthamo nokuguquguquka kwehla futhi imakethe kubonakala sengathi imile ukunyakaza. Bese, ivolumu nokuguquguquka kungazelelwe spike, futhi imakethe iqala ukuhlangana futhi isiqondise ukuthambekela. Lokhu yilokho okwenzeka kakhulu emakethe ethrendayo, imakethe iyakhula futhi izinkontileka kaninginingi izikhathi ezimbalwa.
Abahwebi "abasukela" intengo bavame ukuhweba ngezigaba zokunwetshwa. Noma kunjalo, abathengisi abahlakaniphile bayazi ukuthi kungcono ukuhweba phakathi nezigaba zokuncipha. Ibavumela ukuthi bangene emakethe ngentengo engcono ngaphambi kokuthi imakethe iqale ukuhlangana.
Isu le-Squeeze Break Retracement Forex Trading Strategy lihweba ngalezi zigaba zokuncipha. Isebenzisa izinkomba ezenzelwe ngokukhethekile ukuthola lezi zigaba zemakethe.
Inkomba ye-sMAMA iyinkambiso elandelayo ebonisa ukuthi ngokuyisisekelo isilinganiso sokuguquguquka esenziwe ngokwezifiso. Umqondo wesilinganiso sokuhamba oguqukayo waqala ukwethulwa nguJohn Ehler. Usebenzisa ama-MAMA kanye ne-FAMA ezomhlaba ezihambayo, okusebenze kahle. I-sMAMA isuselwe kulezi zilinganiso ezihambayo.
I-sMAMA idweba imigqa emibili, enye ishesha kunenye. Ulayini osheshayo unombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngenkathi umugqa ohamba kancane unombala obomvu. Umkhuba utolikwa njenge-bullish noma kunini lapho umugqa oluhlaza okwesibhakabhaka ungaphezulu komugqa obomvu. Ngokwesinye isandla, imakethe ibhekwa njenge-bearish noma nini lapho umugqa oluhlaza okwesibhakabhaka ungaphansi komugqa obomvu. Izimpawu zokubuyiselwa emuva kwethrendi zenziwa noma nini lapho imigqa emibili i-crossover.
Cindezela Break Inkomba
Isikhombi se-Squeeze Break sisekelwe isu likaJohn Carter elishiwo encwadini yakhe, Ukuba yingcweti Trade.
Kusu lakhe, UJohn Carter ubheka ukuthi imakethe isesigabeni sokuncipha noma nini lapho amaBollinger Bands akhinyelwa ngaphakathi kweKeltner Channel. Ubheka nemakethe ukuthi ibe sesigabeni sokunweba noma nini lapho iBollinger Bands iphuma kumaKeltner Channels. Lo mqondo unengqondo kakhulu ngoba amaBollinger Bands anemigqa yangaphandle eklanyelwe ngqo ukuphendula ukungazinzi. Le migqa iyanda ngesikhathi sesivumelwano nenkontileka ngesikhathi sesivumelwano. Iziteshi zeKeltner ngakolunye uhlangothi aziphenduli kangako ekushintshashintsheni uma kuqhathaniswa neBollinger Bands. Lokhu kwenza ukusebenzisa izinkomba ezimbili ngale ndlela kube kuhle kakhulu ukuthola izigaba zokunweba nezesivumelwano.
Isikhombi Squeeze Break sikhombisa ukunwetshwa nokusikwa ngamabha we-histogram. Amabha amade amade akhombisa ukuthi amaBollinger Bands aqhamukile eKeltner Channel, okukhombisa ukuthi imakethe isesigabeni sokunweba. Amabha amabi aphrintwa lapho iBollinger Bands ingene ngaphakathi kweKeltner Channel, okukhombisa ukuthi imakethe isivele inenkontileka.
Isikhombi Squeeze Break sibuye sibe nomugqa ohlaza okwesibhakabhaka oscillating olingisa ukuhamba kwentengo. Lo mugqa usetshenziselwa ukukhombisa ukuqondiswa kwesitayela. Umkhuba ubhekwa njenge-bearish lapho umugqa ungaphansi kwe-zero futhi unamandla lapho umugqa ungaphezulu kuka-zero. Ama-crossovers kumaki we-zero akhombisa isignali yokuguqula umkhuba.
Leli qhinga lidayisa ngesikhathi sesigaba sokuncipha kwemakethe ethrendayo. Emakethe ethrendayo, izigaba zokuncipha zivame ukwenzeka njengokubuyiselwa emuva. Lokhu kuvumela abathengisi ukuthi bangene ngentengo engcono ngaphambi nje kokuba imakethe iqale ukwanda.
Ukuze uthole ukuqondiswa kwethrendi, sizobe sisebenzisa i-50-period Simple Moving average (Isikolo sebanga eliphezulu). Amathrendi azosuselwa emthambekeni we 50 I-SMA nendawo yentengo maqondana ne- 50 Isikolo sebanga eliphezulu.
Bese, sizobe sahlulela ukuthi imakethe iyangena yini noma ayisebenzisi inkomba ye-Squeeze Break. Imakethe izothathwa njengenkontileka noma nini lapho imigoqo ye-histogram incane kakhulu noma ingcono kepha ingalungile.
Izigaba zokuncipha kufanele futhi zihambisane nokubuyiselwa emuva. Intengo kubhekwa ukuthi ibuyiselwe emuva uma i-sMAMA iwela iye esiqondisweni se- 50 Isikolo sebanga eliphezulu.
Izimpawu zokungena kwezohwebo zenziwa lapho kuhlangana khona ukuwela i-sMAMA kanye nokuwela kolayini oluhlaza okwesibhakabhaka we-Squeeze Break over zero okukhombisa ukuqondiswa kwethrendi enkulu ngokuya nge 50 Isikolo sebanga eliphezulu.
Isikhathi Esikhethwayo Uhlaka: 15-imizuzu, 30-imizuzu, 1-ihora, 4-ihora namashadi nsuku zonke
Intengo kufanele ibe ngaphezu kwe- 50 Umugqa we-SMA.
I- 50 Ulayini we-SMA kufanele uhlehle phezulu ukhombisa ukuthambekela kwe-bullish.
Imakethe kufanele inkontileka ebangela ukuthi imigoqo ye-Squeeze Break histogram ibe mincane noma yeqe ngaphansi kuka-zero.
Intengo kufanele ibuye ibangele ukuthi umugqa oluhlaza okwesibhakabhaka we-sMAMA weqe okwesikhashana ngaphansi komugqa obomvu.
Ulayini oluhlaza okwesibhakabhaka wesikhombi se-Squeeze Break kufanele weqe ubuyele emuva ngaphezu kukaziro okukhombisa ukuhlehla kwethrendi ye-bullish.
Umugqa oluhlaza okwesibhakabhaka we-sMAMA kufanele uwelele emuva ngaphezu komugqa obomvu obonisa ukuguqulwa kwethrendi ye-bullish.
Izimpawu zokubuyiselwa emuva kwe-bullish kufanele ziqondaniswe eduze.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa oluhlaza okwesibhakabhaka we-sMAMA weqa ngaphansi komugqa obomvu.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho i-Squeeze Break's blue iwela ngaphansi kuka-zero.
Intengo kufanele ibe ngaphansi kwe- 50 Umugqa we-SMA.
I- 50 Ulayini we-SMA kufanele wehle phansi ukhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
Intengo kufanele ibuye ibangele ukuthi umugqa oluhlaza okwesibhakabhaka we-sMAMA weqe okwesikhashana ngaphezu komugqa obomvu.
Ulayini oluhlaza okwesibhakabhaka wenkomba ye-Squeeze Break kufanele weqe ubuyele emuva ngezansi kziro okukhombisa ukubuyela emuva kwethrendi.
Umugqa oluhlaza okwesibhakabhaka we-sMAMA kufanele uwelele emuva ngezansi komugqa obomvu obonisa ukuguqulwa kwesimo se-bearish.
Izimpawu zokubuyiselwa emuva kwe-bearish kufanele ziqondaniswe eduze.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa oluhlaza okwesibhakabhaka we-sMAMA weqa ngaphezu komugqa obomvu.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho i-Squeeze Break's blue iwela ngaphezu kuka-zero.
Lelisu lisebenza kahle impela ngesikhathi semakethe ethrendayo. Abahwebi bangasebenzisa leli su ngokushesha nje lapho bebona imakethe ethrendayo ehlonipha i- 50 Umugqa we-SMA.
Lelisu lihle kakhulu kubathengisi bosuku abathengisa amashadi wemizuzu engu-15 kuze kufike kumashadi wehora eli-1 noma abathengisi be-swing abathengisa eshadini lamahora ama-4 noma eshadini lansuku zonke. Kungasebenza futhi ngezikhathi ezibekiwe eziphansi, kodwa-ke kungahle kube khona ama-whipsaws angahle ashaye ngaphambi kwesikhathi ukulahleka kokuma.
Ukhiye wokuhweba leli qhinga ngempumelelo ukukhomba izitayela. Kuhle futhi ukuhweba ngamathrendi amasha futhi uvikele ukuthambekela okweqile. Amathrendi abuyele emuva ngaphezu kwezikhathi ezintathu kunamathuba amaningi okuthi ahlehle kunokuba aqhubeke nokuthambekela. Esimweni esinjalo, kungcono ukugwema ukuhweba ngaleli su.
#4 – Isiliva Trend Momentum Forex Trading Strategy
Olunye uhlobo lwamasu abathengisi okufanele babe nalo ku-arsenal yabo luhlobo lomfutho wecebo lokuhweba. Lokhu kungenxa yokuthi amasu omfutho alula futhi ayasebenza. Empeleni, kukhona abadayisi abaxhome imisebenzi yabo yokuhweba bezungeza amasu okuqina okuhweba kuphela, futhi baphumelela impela ngakho.
Amasu we-Momentum asuselwa emcabangweni wokuthi ukunyakaza kwamanani aqinile kuvame ukuguqula umbono wemakethe ngesiqondiso sethrendi. Abantu bacabanga esixukwini. Ezimweni eziningi, ngokushesha nje lapho abathengisi bebona ukushintsha komfutho, abathengisi abaningi bavame ukulandela bekholelwa ukuthi ukuthambekela kuyashintsha impela. Lokhu kuba yisiphrofetho esizifeza njengabahwebi abazama ukugibela intengo “entsha” yokuqhubekisela phambili intengo ngokuya ngasekhandleleni lomfutho.
Esinye isifaniso engisisebenzisela umfutho ukuqothuka kwesilwane. Izinyathela zezilwane ziqala lapho iqembu elincane lomhlambi omkhulu lithuka futhi liqala ukugijima lisuka kusongo olubonakalayo. Lokhu kuqwashisa abanye abaphakathi komhlambi nezinye izilwane bese beqala ukugijima beya ohlangothini olufanayo nalabo abaqala ukubona usongo, noma bengazi ukuthi babalekelani. Bese, ngaphambi kokuthi wazi, kuqhume isilwane. Kuyafana nokuhweba. Ekuqaleni, iqembu elincane lemakethe lizobona ukuthi inani liphezulu kakhulu noma liphansi kakhulu. Kungenzeka kususelwe ekukhishweni kwezindaba eziyisisekelo noma kumabhange amakhulu athile anokuthengiselana okukhulu. Ukunyakaza kwentengo okuqinile kuyabe sekuboniswa eshadini lentengo njengekhandlela elikhulu eliqinile. Njengoba leli khandlela lakheka, abanye abathengisi abathengisayo bazoyibona futhi bakholelwe ukuthi intengo isiqala ukuhamba ngendlela ethile. Kungenzeka bangazi ukuthi kungani imakethe ihambile kepha bayayibona ihamba futhi ngakho-ke bathengisa ohlangothini olufanayo. Ngaphambi kokuthi wazi, umfutho usuqalile futhi intengo iqala ukuhlangana. I-logic ingakutshela ukuthi kuwumqondo omubi kakhulu ukuma phambi kwesiteleka. Kuyafana nokuhweba. Kungumqondo omubi kakhulu ukuhweba ngomfutho oqinile.
Isignali Yesitayela Sesiliva
Isikhombi se-Silver Trend Signal siyinkomba ehlukile elandelayo yenkomba. Kukhombisa ushintsho lwethrendi ngokuya ngokuhlangana kwezinto ezihlelwe ngaphakathi kwe-algorithm yayo. Ngemuva kwalokho iphrinta umcibisholo obonisa iphoyinti lokuhlehla kwethrendi elingaba khona.
Le nkomba inembe kakhulu uma iqhathaniswa nezinye izinkomba. Ikhiqiza amanye amasignali angaholeli kumathrendi kepha iningi lamasignali alo angaveza inzuzo. Le nkomba ingenza okuhle uma isetshenziswa ngokuhlangana nezinye izinkomba nokuhlaziywa kwesenzo sentengo.
ISMI imele iStochastic Momentum Index. I-SMI iyinkomba yomfutho esuselwa ku-Stochastic Oscillator. Empeleni, i-SMI ibhekwa njengenguqulo elungisiwe ye-Stochastic Oscillator. Ivumela ukunyakaza kwentengo ebanzi uma kuqhathaniswa ne-Stochastic Oscillator.
I-SMI futhi kuhloswe ngayo ukukhomba ukuguqulwa kwamandla okuqhamuka uma kuqhathaniswa ne-Stochastic Oscillator ejwayele ukusetshenziselwa ukukhomba ukubuyela emuva ezimweni zemakethe ezithengwe kakhulu nezithengiswa kakhulu..
I-SMI ikhomba ukuguqulwa komfutho ngezindlela ezimbalwa. Okokuqala, isebenzisa imigqa emibili ye-stochastic ekhipha ngokukhululekile ewindini layo. Le migqa ivame ukwenza i-crossover noma kunini lapho kuba nokuguqulwa kwethrendi. Lezi crossovers zingasetshenziswa njengezimpawu zokungena. Enye indlela ukusebenzisa i-midpoint yayo njengesiginali. Abahwebi bangasebenzisa imigqa eyeqa isuka kokuhle iye kokubi noma okuphambene nalokho njengesiginali yokubuyisa umkhuba.
Lelisu lokuhweba linikeza izimpawu zokuhweba ngokususelwa ekuhlanganeni kwezinkomba ezingenhla ngokuhlangana nekhandlela lomfutho.
Amakhandlela we-Momentum avame ukusetshenziselwa abathengisi bezenzo zamanani njengenkomba yokuthi intengo ingabuyela emuva noma ingaqhubeka ngokuqinile ohlangothini oluthile. Lokhu kungenxa yokuthi amakhandlela omfutho akhombisa ukuthi intengo ihambe kakhulu ngesikhathi esifushane futhi kungenzeka ngevolumu enkulu. Amakhandlela we-Momentum angabonakala kumashadi entengo njengamakhandlela amakhulu amakhulu anezintambo ezincane kakhulu emaphethelweni womabili. Lokhu kuzoba okunye kokucatshangelwa kwethu okuyinhloko lapho sisebenzisa leli qhinga.
Lelisu likhiqiza izimpawu zokuhweba ngokususelwa ekuhlanganeni kweSilver Trend iphrinta isignali yokungena, isibonisi se-SMI sinqamula ukusuka kokuhle kuye kokuphikisayo noma okuphambene nalokho, nekhandlela lomfutho elivela ngesikhathi esifanayo nokuhlangana kwezinkomba.
ex4 (izilungiselelo ezizenzakalelayo)
Ulayini osheshayo wenkomba ye-SMI kufanele weqe ngaphezu kuka-zero obonisa ukuguqulwa kwethrendi ye-bullish
Isikhombi se-Silver Trend kufanele siphrinte umcibisholo okhomba phezulu okhombisa isignali yokungena mkhuba we-bullish
Ikhandlela lomfutho we-bullish kufanele livele
Lezi zimpawu ze-bullish kufanele zihambisane kakhulu
Setha ukulahleka kokuma kwamapayipi ambalwa ngezansi kwekhandlela lokungena
Hlela inkomba yenzuzo ku-1.5x ubungozi ekulahlekelweni kokuma
Ulayini osheshayo wenkomba ye-SMI kufanele weqe ngaphansi kuka-zero obonisa ukuguqulwa kwethrendi ye-bearish
Isikhombi se-Silver Trend kufanele siphrinte umcibisholo okhomba phansi okhombisa isignali yokungena kwe-bearish
Ikhandlela lomfutho we-bearish kufanele livele
Lezi zimpawu ze-bearish kufanele zihambisane kakhulu
Setha ukulahleka kokuma kwamapayipi ambalwa ngaphezu kwekhandlela lokungena
Lelisu lokuhweba elisuselwa kumakhandlela omfutho lisebenzisa kokubili ukuhlaziywa kwesenzo sentengo nezinkomba zobuchwepheshe. Lokhu kunikeza abathengisi isu lokuhweba elinamandla elikhiqiza okungenayo kokuhweba okuphezulu.
Leli su lokuhweba linesilinganiso esingaguquki sengozi yomvuzo 1.5:1. Lolu hlobo lwecebo ngokwemvelo lukhiqiza umkhawulo wokuhweba ngaphezu kwemakethe. Okusemqoka ukuthola amasethaphu wokuhweba aphezulu okungenza ukuthi intengo ibhekise entengo yethagethi yenzuzo yokuthatha kunokuba kube nokulahleka kokuma.
Okokugcina, kungcono ukusebenzisa leli qhinga emakethe engajwayele ukushaywa i-whipsaws njengoba amanye amakhandlela anomfutho angaholela kumathrekhi "wesitimela" noma "amapayipi phezulu nangaphansi" okuyisibonakaliso esiphambene ngqo nalokho esingathanda ukukuhweba. Lawa maphethini ajwayele ukwenzeka ezimakethe ezivame ukubhaxabula noma zihle kakhulu.
#5 – Amandla Esihlobene Trend Forex Trading Strategy
Olunye uhlobo lwesu olusebenza kahle yisu elisekelwe kumkhuba wesikhathi eside. Lawa ngamasu angadinga isineke esikhulu njengoba abahwebi kuzodingeka balinde izimo ezithile zesikhathi eside ukuthi zenzeke.. Noma kunjalo, uma kwenziwa kahle, ukuhweba kwesikhathi eside kuvame ukuvuza kakhulu.
Abadayisi abaningi abangochwepheshe bakhetha ukuba namasu amaningana abangawasebenzisa ezimeni ezihlukene zemakethe nangezikhathi ezihlukene. Abahwebi bavame ukuba ne-scalping noma isu lokuhweba ngosuku kanye nesu lokuhweba nge-swing. Abanye abathengisi banamasu asebenza kahle kumathrendi wesikhathi esifushane kanye nelinye isu elisebenza kahle kumkhuba wesikhathi eside. Njengomhwebi, kungase kube umqondo omuhle ukuba nesu ongalisebenzisa enkambweni yesikhathi eside ngaphezu kwamanye amasu ongase uwasebenzise uma uhweba ngosuku..
I-Relative Strength Trend Forex Trading Strategy ingelinye eligxile kumkhuba wesikhathi eside. Kusekelwe ekuhwebeni ngama-bounces okusekela okuguquguqukayo kwesikhathi eside noma ukumelana kanye nokugqashuka kwemigqa yethrendi.
200-I-Period Exponential Moving Average (UMAMA)
I- 200 Exponential Moving Average (UMAMA) iyisisekelo phakathi kwabadayisi abaningi abangochwepheshe nabezikhungo. Lokhu kungenxa yokuthi laba bahwebi babheka izitayela zesikhathi eside futhi bahweba emkhathizwe ende uma kuqhathaniswa nabathengisi abaningi..
Abahwebi bebevame ukuyibheka ukuze bathole isiqondiso maqondana nenkombandlela yesikhathi eside futhi ngokuvamile babeqondisa ukuhweba kwabo lapho kuya khona.. Bangayisekela lapho intengo ihlobene khona 200 EMA noma kanjani 200 I-EMA ishelelekile.
Abanye bangayisebenzisa njengesisekelo sokulandela umkhondo kanye nokugxuma okuvela ekusekelweni okunamandla kwesikhathi eside noma ukumelana. Intengo ijwayele ukuhlonipha lo mugqa omaphakathi onyakazayo njengoba abadayisi abaningi bewubhekile. Ezimweni eziningi lapho inkambiso yesikhathi eside ikhona, intengo izovame ukwehla kuyo ngokushesha nje lapho intengo isondela endaweni eseduze nayo.
Amandla Ezihlobene Oscillator (RSO)
Amandla Ezihlobo Oscillator (RSO) iyinkomba yezobuchwepheshe ehlobene eduze ne-Relative Strength Index (I-RSI). Ngendlela, ifana kakhulu ne-RSI kuphela ukuthi iyinguqulo yayo e-oscillating.
Ngenkathi ulayini we-RSI unobubanzi ukusuka 0 uku 100, i-RSO isuka -50 uku +50. Lokhu kuvumela inkomba ukuthi inyakaze ngokukhululeka isuke kokuphozithivu iye kwenegethivu kuyilapho igcina ukulinganisa. Imakethe ibhekwa njenge-bullish lapho umugqa ulungile futhi ube ne-bearish lapho umugqa ungalungile. Iphinde iphrinte amabha e-histogram anombala asuselwa ekutheni ibha inesibalo esikhulu kunebha yangaphambilini noma cha..
Inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed iyinkomba ethembeke kakhulu elandelayo. Kuwukuhluka kwamakhandlela e-Heiken Ashi nokho kuhlobene kakhulu ne-Exponential Moving Average.. Okuwukuphela kokufana inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed enamakhandlela e-Heiken Ashi ukuthi iphinde yethulwe njengama-bar anezintambo.. Kunalokho, i-Heiken Ashi Smoothed inguqulo eshintshiwe ye-Exponential Moving Average.
Inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed ithembekile kakhulu ekuboniseni izikhombisi-ndlela zethrendi. Isebenza kahle kakhulu ekuboniseni ukuthi ithrendi ihlehlile noma cha futhi ayingenwa kalula ekuguqulweni kwethrendi okungelona iqiniso..
Leli su lokuhweba liyinhlanganisela yokunqamuka kokusekela okudiagonal noma ukuphikiswa futhi liphuma ekusekelweni okunamandla noma ukumelana., okungaba yi 200 UMAMA. Lolu hlobo lokusethwa kwethrendi ngandlela thize lumele ukulandelela kuncazelo yesikhathi eside. Kuphinde kuvame ukucindezela intengo phakathi kosekelo lwe-diagonal noma ukumelana nosekelo oluguqukayo noma ukumelana. Bese silinda ukuthi intengo iqhamuke ibheke ekusekelweni kwe-diagonal noma ukumelana futhi sihwebe ngokufanele.
Noma kunjalo, sizobe futhi sisebenzisa isiqinisekiso esisekelwe ekuhlanganeni kwezinkomba ezimbili ezithembekile zobuchwepheshe, okuyi-RSO kanye nenkomba ye-Heiken Ashi Smoothed.
Isikhathi Esikhethwayo Uhlaka: 1-ihora, 4-ihora namashadi nsuku zonke
Intengo kufanele ibe ngaphezu kwe- 200 I-EMA ekhombisa ukuthambekela kwesikhathi eside kwe-bullish.
Intengo kufanele ibuyele emuva eduze kwe- 200 UMAMA.
Ukumelana kwe-diagonal kufanele kubhekwe.
Inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed kufanele ishintshe ibe luhlaza okwesibhakabhaka ikhombisa ukuhlehla kwe-bullish.
Ulayini we-RSO kufanele ube omuhle okhombisa ukuguqulwa kwe-bullish.
Lezi zimpawu ze-bullish kufanele zihambisane.
Setha ukulahleka kokumisa kancane ngaphansi kwesikhombisi se-Heiken Ashi Smoothed.
Vala ukuhweba ngokushesha lapho inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed iba bomvu.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho ulayini we-RSO uba mubi.
Intengo kufanele ibe ngaphansi kwe- 200 I-EMA ekhombisa ukuthambekela kwesikhathi eside kwe-bearish.
Ukwesekwa kwe-diagonal kufanele kubhekwe.
Inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed kufanele ishintshe ibebomvu ekhombisa ukuguqulwa kwe-bearish.
Ulayini we-RSO kufanele ube mubi okubonisa ukuhlehla kwethrendi ye-bearish.
Lezi zimpawu ze-bearish kufanele zihambisane.
Lelisu lezohwebo yilelo elisebenza ngokunenzuzo. Isebenza kahle kakhulu ngezikhathi eziphakeme, ikakhulukazi kumashadi ansuku zonke. Noma kunjalo, lelisu lithatha isikhathi eside ukuthi libe nokwakheka. Abahwebi abahweba kuphela ngaleli qhinga bangase babe nezinsuku ezingenakho ukuhweba. Kungcono ukuhlanganisa leli su nelinye isu lokuhweba ngosuku lokusebenza njengoba lingavumela umhwebi ukuthi enze inzuzo usuku nosuku..
Konke 5 amasu okuhweba forex angakusebenzela kahle. Noma yikuphi kwe amasu forex futhi Izinkomba ze-mt4 ngenhla ingasebenzela umhwebi ofanele uma isetshenziswa esimweni semakethe esifanele. Bamba kahle lezo ozizwa zikufanele kakhulu futhi uzisebenzise emakethe efanele. Ukuhweba Okujabulisayo!
Phezulu 5 Best Forex Trading Strategies That Work is a combination of Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Phezulu 5 Best Forex Trading Strategies That Work provides an opportunity to detect various peculiarities and patterns in price dynamics which are invisible to the naked eye.
Indlela yokufaka i-Top 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ze Forex ezisebenzayo?
Khipha ku-internet Phezulu 5 Best Forex Trading Strategies That Work.zip
Hambisa kwesokudla ukuze ukhethe Phezulu 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ze Forex ezisebenzayo
Uzobona Phezulu 5 Best Forex Trading Strategies That Work is available on your Chart
Isiqephu esedluleWave Rider Forex Ukuhweba Isu
Isihloko esilandelayo2 MA Pivot Forex Ukuhweba Isu